Weeraro halis ayay la kulmaan Shaqaalaha Gargaarka ee Soomaaliya. – XOGMAAL.COM
Xafiiska QM ee isku xirka arrimaha gargaarka ayaa waxaa uu sheegay in 90 dhacdo oo rabshado ah ay saameeyeen Heey’adaha Banii aadanimadda, taasi oo keentay in la Afduubto 18 ruux si ku meelgar ahna loo xiro 13 kale.
Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in shaqaalaha gargaarka ee Soomaaliya Weerarro lagu qaaday lagu dilay 8 ruux halka lagu dhaawacay 12 kale intii u dhexeeysay January iyo September ee Sanadkan.
“ Khasaaraha ka yimid Weeraradda argagixisadda ee meelaha Dadku ku badanyihiin ee Muqdisho ayaa ku jira Tiradda ugu badan ee Dhimashadda iyo dhaawaca iyo sidoo kale bururka agabka gargaarka” ayey tiri Heey’adda QM oo jimcihii soo saartay Wabixinteeda banii aadanimadda.
Heey’adda OCHA ayaa scambaaareeysay Weeraradda saameeynaya heey’addaha Banii aadanimadda ee Soomaaliya, waxayna Heey’addu sheegtay in Rabshadaha banii aadanimaddu kordheen.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay Hey’adaha Banii aadanimaddu waxay joojiyeen Howlihii gargaar ee ay ha wadeen Shabaleeha Hoose, taasi oo sameysay 34,000 oo ruux, sida ay sheegtay QM.
Gabadhii ugu horreysay Taariikhda Sacuudi Carabiya ayaa xil sare loo magacaabay.